मैनालीको अवस्था स्थिर, थाइको हाड भाँच्चियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मैनालीको अवस्था स्थिर, थाइको हाड भाँच्चियो
फाल्गुन १५, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — नेकपा(माले)का महासचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीको कार दुर्घटनामा थाइको हाड(फेमुर बोन) भाँच्चिनुको साथै हाल स्वास्थ्य स्थिती स्थिर रहेको छ । उनको शरीरको सिटी स्क्यान भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
झापाबाट काठमाडौं आउने क्रममा महोत्तरीको बर्दिवासमा गाडी दुर्घटना भएपछि मैनालीलाई दिउँसो ४ बजेर २० मिनेटमा काठमाडौंस्थित ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा ल्याइएको हो ।
‘उहाँ(मैनाली)को थाइको हाड भाँच्चिएको छ,छाती, पेट आदि विभिन्‍न ठाउँमा दुखी रहेको गुनासो गर्नु भएको छ’, अस्पतालका निर्देशक डा.चक्रराज पाण्डेले भने,‘उहाँको अवस्था हाल स्थिर छ ।’
अस्पतालमा मैनालीले राम्ररी बोल चाल गर्नुको साथै व्यक्तिलाई चिन्ने समेत गरेका छन् । चिकित्सकले सिटी स्क्यानको रिपोर्टपछि मेनालीको वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट हुने जनाएका छन् ।
उक्त दुर्घटना मै घाइते भएकी मैनालीका बुहारी पुजा ढुङ्गानाको दुइटै खुट्टाको हाड(टिविया) भाँच्चिएको छ । यस्तै मैनालीको ५ वर्षे नातीको टिविया हाडमा निको हुने फ्राक्चर रहेको पाण्डेले बताए ।
कार दुर्घटनामा माले महासचिव मैनालीसहित ५ जना घाइते [अपडेट] प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ १७:३९
'गाउँमा जन्मेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएर जाँदा बाजा बजाए, नाचे र उत्सव मनाए, पत्रकार किन दुःखी ?'
फाल्गुन १५, २०७६ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्मोत्सवलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफ्नो जन्मदिनमा आफू जन्मिएको घर तेह्रथुम जाँदा त्यहाँका जनता घरमा पानी आएको र बिजुली बलेको खुसीमा नाचेको बताए ।
उनले आफ्‍नो जन्मदिनमा स्थानीयलाई नाच्न लगाएको भन्ने झूटो प्रचार गरिएको दाबी गरे।
बिहीबार नेकपाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको वाग्मती प्रदेश कमिटीको राजनैतिक प्रशिक्षण तथा भेला कार्यक्रममा बोल्दैप्रधानमन्त्री ओलीलेभने, 'पानीको धारा खसेको छ। दिदीबहिनीहरु नाचे, त्यसमा किन चिन्तित हुने? जनता आए, खाना खाए, पत्रकारहरुले भातको हिसाब गरे।'
उनले भने, 'म धेरै वर्षपछि जन्मथलो गएँ। गाउँमा जन्मेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएर जाँदा बाजा बजाए, नाचे र उत्सव मनाए, पत्रकार किन दु:खी हुने?' यस्तै, उनले आफ्नो जन्मदिनमा केक लिएर नगएको बताए। उनले भने, 'जनताले खुसी भएर केक ल्याए, मैले नाच भनेको त थिइनँ नि ! '
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई भाँड्न खोज्ने र बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले मजबुत संगठनलाई मतभेद रहित र विवादमुक्त गराएर लैजाने बताए।
उनले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसप्रति पनि तीखो टिप्पणी गरे। उनले नाकाबन्दी हुँदा, ग्यासको अभावका बेला नाकाबन्दी शब्द पनि ननिकालेको कांग्रेसले केकमा राष्ट्रवादी बनेको भन्दै तमासा देखाएको आरोप लगाए।संसद्मा बोल्न खोज्दा बोल्न नदिने कांग्रेसले सांसद्बाट भाग्यो भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीकोदाबी थियो।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको केही दिनभित्रै किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, 'केही दिनभित्र किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गर्छु, पाँच दिन अस्पताल बस्छु छैटौं दिन घर आउँछु, ढुक्क भए हुन्छ। '
ओलीले आफूलाई मानिसहरुले बिरामी भनेपनि दैनिक १७/१८ घण्टा काम गरेको बताए। उनले भने, 'मान्छे बिरामी पर्छ, जिन्दगी भनेको यस्तै हो। '
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ १७:३४